Kylian Mbappe oo go’aan ka gaaraya Mustaqbalkiisa PSG… (Miyey u badan tahay inuu ku biiro Kooxda Liverpool?) – Gool FM
(Paris) 26 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Liverpool ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa la la xiriirinayaa inay u dhaqaaqdo xiddiga naadiga PSG ee Kylian Mbappe.
Weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe ayaa wararku waxa ay sheegayaan inaysan u badnayn inuu u dhaqaaqi doono garoonka Anfield, xilli lagu wado inuu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa Kooxda PSG.
Laakiin mustaqbalka Mbappe ee kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska ayaa mugdi sii galay, iyadoo uu haatan ku jiro 12-kiisii bilood ee ugu dambeeyey heshiiskiisa naadiga PSG.
PSG ayaa suuqa kala iibsiga ciyaartoy kala soo wareegtay, waxaana ay la yimaadeen xiddigii hore ee Liverpool, Wijnaldum, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Sergio Ramos iyo Goolhaye Gianluigi Donnaruma.
Yeelkeede, Macallin Mauricio Pochettino ayaa dharbaaxo xun kala kulmay Mbappe oo diidan inuu heshiiska u kordhiyo kooxda sida wararku ay sheegayaan.
Jariiradda Marca ee ka soo baxda dalka Spain ayaa warinaya in Mbappe uu u sheegay Macallin Mauricio Pochettino inuusan qorsheynaynin inuu kordhiyo heshiiskiisa uu haatan ku joogo caasimadda Faransiiska.
Taasi waxay la macno tahay in 22-sano jirkaan la heli karo dhammaadka sanadkan kooxdii uu doonana uu ku biiri karo, Kooxda Liverpool ayaana ka mid ah kooxaha inta badan doon-doonaya saxiixa laacibkan, balse wararku waxa ay tilmaamayaan in haddiiba uu Mbappe ka tagayo PSG uu u dhaqaaqi doono kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Real Madrid.